Ihe ị ga-ahụ n'obodo Leuven | Akụkọ Njem
Ọ bụrụ na ị ga-aga Brussels ọ ga-ekwe omume na otu ụbọchị ịchọrọ ịme njem n'akụkụ ebe dị nso, dị ka obodo leuven nke anyị ga-ekwu maka ya taa. Obodo a dị n’ebe njikọta osimiri Dijle na Voer, kilomita ole na ole site na Brussels.
Nke a bụ a obodo enwere ike ịga leta n'otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ, nakwa na n'agbanyeghị na amachaghị nke ọma na-enye ụdị ntụrụndụ ọ bụla, site na ọdịbendị na gastronomy na akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ncheta. Anyị ga-achọpụta otu esi aga obodo mara mma nke Leuven na ọkachasị ihe ebe a dị nso na Brussels nwere ike ịnye anyị.
1 Otu esi aga Leuven
2 Ulọ Nzukọ Obodo Leuven
3 Ebe nchekwa Leuven
4 Ebe Ndị Martyrs
5 Mahadum Mahadum
6 Peterka St. Peter
7 Oude Onyekwere
8 Ogige Botanical
Otu esi aga Leuven
La obodo Leuven dị ihe dịka kilomita iri atọ site na Brussels na i nwere ike na-aga site ụgbọ okporo ígwè, ịbụ otu n'ime ndị kacha na kasị ụzọ. Na Belgium Rail ị nwere ike ịhụ oge na ọnụahịa ị ga-esi na Brussels. Ọ bụ njem dị mkpirikpi nke ihe dị ka nkeji 25, yabụ anyị ga-eme ka ụbọchị kachasị n'obodo ahụ n'ebughị ụzọ nọrọ ogologo oge site n'otu ebe ruo ebe ọzọ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ezigbo nhọrọ maka mgbapụ si Brussels.
Ulọ Nzukọ Obodo Leuven
Ọ bụ ezie na ụlọ nzukọ obodo na-abụkarị ebe a na-agafe n'obodo, na-enwe mmasị ụfọdụ ma ọ bụghị nke ukwuu, eziokwu bụ na Leuven City Council anaghị ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị na nnukwu ịma mma ya. Ọ bụ ụlọ e kere na ụdị gothic na-enwu gbaa, nwere ihe karịrị 200 ihe oyiyi na facade ya. Na mpụga ọ na-ahapụ anyị masịrị anyị, mana ị nwekwara ike ịga na ime ya, yana tiketi nke anaghị efu oke. Ejiri ụdị zuru ezu nke nkọwa ya chọọ ụlọ ya mma. Dị ka akụkọ, kọwaa na ụlọ ahụ lanarịrị ọkụ na-alụ Agha Worldwa Mbụ na bọmbụ nke mechiri ihu ya mana ọ dịghị mgbe ọ gbawara na Agha IIwa nke Abụọ. Naanị ụlọ a kwesịrị ịga leta obodo ahụ.
Ebe nchekwa Leuven
N’ụlọ ngosi ihe nka a anyị na-enweta mkpokọta na-adịgide adịgide na nke ị nwere ike ịhụ ọrụ site na Flemish nka site na narị afọ nke XNUMX. N'aka nke ọzọ, enwere ụfọdụ ihe ngosi njem na echiche sitere na mbara ala dị oke mma. Ha adighi ka ogologo dị ka echiche sitere na ụlọ elu ọbá akwụkwọ mahadum, mana ha ka mara mma, gbakwunye ụlọ ngosi ihe nka nwere igwe mbugo maka ndị na-enweghị ike ịrị elu ụgbọ elu ogologo.
Ebe Ndị Martyrs
Ogige a na-esote ọdụ ụgbọ oloko, yabụ ọ nwere ike bụrụ ihe mbụ anyị na-eleta mgbe anyị si n'ụgbọ okporo ígwè pụọ. N'ime ya bụ ncheta maka ndị metụtara Agha victimswa nke Mbụ na nke Abụọ. Na ebe ozo, enwekwara ulo egwu.
Nke a bụ obodo mahadum ama ama, na ya n'ọbá akwụkwọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa na Europe. Ihu ihu nwere ụdị Flemish Renaissance na n'ime ya ị nwere ike ịhụ ihe ncheta dị iche iche nke ebe a kpọgidere na nnukwu 23-mita spire. Ọbá akwụkwọ nwere ike hụrụ site n'ime, ọ bụ ezie na ọ na-arụsi ọrụ ike n'oge ule. Ọ mara mma, mara mma, ma nwee ọtụtụ puku aha, agbanyeghị na e bibiri ya n’Agha I.wa Mbụ. Ọ bụrụ na anyị nwekwara ike ịrị elu ụlọ elu ya, anyị ga-enwe echiche kachasị mma banyere obodo ahụ.
Peterka St. Peter
Nke a na chọọchị bụ ihe ọzọ ga-ahụ na obodo na emi odude ke ọwọrọetop nnukwu ọnụ ụlọ obodo. Nke a bụ ụka kacha ochie n’obodo ahụ wee bido na narị afọ nke iri na ise. N'ime ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ọrụ, dị ka ihe osise nke Virgin na Child ma ọ bụ ihe osise nke 'Nri Anyasị Ikpeazụ' site n'aka Dirk Bouts. Ọ bụ ezie na ụka a ga-enwerịrị ụlọ elu kachasị elu nke oge ya, nke bụ eziokwu bụ na o mechara daa daa n'ọtụtụ oge, yabụ na ọ mechara dị elu na chọọchị ahụ.
Na Old Square ma ọ bụ Old Market anyị nwere ebe anyị nwere ike izu ike, ebe ọ nwere oke ikuku. Ọ dị ka nnukwu ụlọ mmanya dị n'èzí. N'oge gara aga, ọ bụ ebe ahụ ka ụlọ ahịa ahụ dị, mana ihe niile a bụ dochie anya ụlọ mmanya na ụlọ nri. Ebe ebe onye ọ bụla na-aga ịnwale gastronomy nke obodo ma ọ bụ zuo ike n'otu n'ime ọtụtụ mbara ala dị na square.
El Obodo botanical ubi bụ nke kasị ochie na Belgium na ya ị nwere ike ịnụ ụtọ obere ọdọ mmiri nke ọtụtụ narị ụdị osisi ndị a na-eweta site n'akụkụ ụwa niile. Ogige a bụ ebe ọzọ anyị nwere ike ịga leta izu ike, mgbe mkpọtụ na mkpọtụ nke Oude Markt gasịrị.
La biya a ma ama nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo, na-eme ka ọ bụrụ nleta kwesịrị maka ndị hụrụ ụtọ bekee n'anya dị iche iche. Dị ka ọ dị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, enwere njem na-eduzi elekere na ọkara, mana anyị ga-amarịrị na ọ na-emeghe naanị site na Mee ruo Ọktọba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ n’obodo Leuven